Global Voices teny Malagasy » #WelcomeHomeAlaa: Navotsotra i Alaa Abd El Fattah, mpikatroka, rehefa nigadra dimy taona · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Avrily 2019 6:03 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui, Ellery Roberts Biddle Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Vaovao Mafana, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Vaky ny vaovao rehefa nanoratra tsotra tao amin'ny Twitter ny anabaviny, mpikatroka Mona Seif , hoe : “Nivoaka i Alaa.”  Avy eo izy nampamirana ny sakaiza sy ny mpiaradia amin'ny anadahiny tamin'ny famoahana ny sarin'ilay mpikatroka malaza tamin'ny revolisiona Ejiptiana misaingy amin'ny alikan'ny fianakaviana, Toka, izay sambany tafahaona taminy:
Fihaonana voalohany teo amin'i Alaa sy Toka ?
Afaka ny tompondakan'ny zo nomerika, mpikatroka Alaa, rehefa am-ponja dimy taona. Tonga soa an-trano avy amin'ireo havana ato amin'ny @globalvoices  @advox 
Nosamborina  sy nesorina tao amin'ny tranon'ny fianakaviany ity mpikatroka 37 taona ity tamin'ny novambra 2013. Mihoatra ny herintaona taty aoriana, tamin'ny Febroary 2015, notsaraina ihany izy nony farany ary nahazo sazy dimy taona an-tranomaizina noho ny “fanomanana” fihetsiketseham-panoherana ny lalàna nivoaka tamin'ny taona 2013 izay mandrara ny fihetsiketsehana tsy nahazoana alalana. Raha nandray anjara tamin'ny fanoherana ny tribonaly miaramila ahatra amin'ny sivily izy tamin'ny 26 Novambra 2013, dia tsy nanana anjara i Alaa tamin'ny fanomanana izany. Nohamafisin'hy Fitsarana tampiny tao Ejipta ny fanasaziana azy tamin'ny Novambra 2017.
Nipoitra avy amin'ny fianakaviana malaza amin'ny fanandrata-teny momba ny zon'olombelona izy, ao anatin'izany ilay mpisolovavan'ny zon'olombelona antsoina hoe Ahmed Seif El Islam , rain'i Alaa, izay nigadra imbetsaka nandritra ny fitondran'i Hosni Mubarak. Mpiaro ny zon'olombelona ihany koa ny anabavin'i Abd El Fattah, i Mona sy i Sanaa Seif izay efa ela tao amin'ny fanentanana hanoherana ny tribonaly miaramila atao amin'ny sivily.
Nivoaka ny fonja i Alaa sakaizan'ny @globalvoices  sy ny @advox  hatry ny ela rehefa nihinana dimy be izao tao am-ponja
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/01/136675/
 mpikatroka Mona Seif: https://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Seif
 “Nivoaka i Alaa.”: https://twitter.com/Monasosh/status/1111411215299833857